बरिष्ठ आयुर्वेद डाक्टरको अनुभव, सवैले अवश्य पढौ
टाइफाइड रोगको हर्बल र आयुर्वेदिक उपचार
बरिष्ठ आयुर्वेद डाक्टरको अनुभव
जुलाई 3, 2019 जुलाई 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments अनुभव, डा. राम बहादुर बोहरा
यस लेखमा हामीले नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर डा. राम बहादुर बोहराको अनुभव उहाँकै भाषामा जस्ताको तस्तै राखेका छौ । म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउँदा १७ बर्षको थिए भने आज म ५८ बर्षको भएछु । अहिले र पहिलेको तुलनामा थुप्रै औषधिहरू परिवर्तन भए जसरी नयाँ-नयाँ औषधि मार्केटमा आए त्यसरी नै नयाँ-नयाँ रोग सुरु हुदै गए । आज नेपालीको पसिना सवै बाहिर गएको छ । स्वदेशमा कुनै अनुसन्धान केन्द्रको अभावमाका कारण विदेशीले अनुसन्धान गरेको औषधिको भरमा जनतालाई बचाउनु परेको देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा हैजा झाडापखालाका रोगी कम पाइन थालेका छन् । हाम्रो पालामा झाडा बान्ताका रोगीको उपचार घर-घरमा गएर गर्ने चलन थियो । हामीले थुप्रै रोगी बचाएका थियौं । आज समयको परिवर्तनसंगै सेवा छोटिदै गएको छ । हामीले विगत लामो समयदेखि ग्रामीण भेगमा बसेर गरीव दु:खीको उपचार गर्न टाढा जान नसक्नेहरूको उपचार गरेका थियौं । त्यतिबेला नेपालमा डाक्टरको अभाव थियो । लाखौं रोगीलाई हामीले बचाएका थियौं । आज हामीलाई सपना जस्तो महसुस हुन्छ ।
अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ युवाहरू आउनु भएको छ । उहाँहरू जन्मनु पुर्ब देखि नै हामीले यो सेवा प्रदान गरेका थियौं । यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि नेपालमा प्रशस्त हुनुहुन्छ तर राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो गरेको देखिदैन यो नितान्त गलत छ । हिजो र आज समय परिवर्तन भएको छ । राज्यले अनुभवीको कदर गर्न जान्नुपर्छ ।
शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि अनुभवको खाँचो हुन्छ । नेपालमा आज जडिबुटी पहिचान गर्ने व्यक्तिको अभावमा त्यसै खेर गईरहेको छ । राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरि समयमा जनतालाई यस्ता औषधिबाट उपचार गर्ने र अनुभवीलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाउन सके नेपालीको पसिना बाहिर जानबाट रोकिने थियो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
हिजो अप्रेसनको अभाव भएको बेला औषधि दिएर पनि कतिपय विरामीको उपचार हुने गरेको थियो । आज समय साक्षेप त्यस्ता विरामीहरूको छिटो-छरितो राम्रो होस् भन्ने उद्धेश्य राखेर रिफर गरेको हुन्छ । हिजो कतिपय अवस्थामा अप्रेसनको अभावमा रोगीलाई लामो समय औषधि दिएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
← नेपाल टेलिकमको चरम लापरबाही
कलेजोमा बोसो बढ्नु र यसका लक्षणहरु →
स्वास्थ्यको लागि बेलौती खानुका फाइदाहरु
जुलाई 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
सेप्टेम्बर 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
सेप्टेम्बर 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ
पेटको बोसो घटाउने घरेलु सरल उपायहरु